नारीको यस्तो डरलाग्दो अवस्था रहँदा १ दिनको नारी दिवसको अर्थ छ ?
शुक्रबार २४ फाल्गुण, २०७५
काठमाडौं । आज नेपाल लगायत विश्वका धेरैं देशहरुमा नारी दिवस मनाइदैंछ । सुरुवातमा महिलाहरुले मत दिन पाउँनुपर्दछ भन्ने उदेश्यका साथ यो आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । अहिले समय फेरिएको छ, अब महिलाहरुका अधिकार, समस्या र समाधानका बारेमा चर्चा हुन थालेका छन् ।
आज नेपालमा अहिले पनि महिलाहरुका समस्या समाधान हुन सकेको देखिएको छैन् । शहरका पाँच तारे होटेलहरुमा दुई चार जना जम्मा भएर नारी दिवस मनाउँदैं गर्दा गाउँमा महिला बोक्सीको आरोपमा कुटिनु पर्छ । बालिका बलात्कृत हुन्छिन्, दाइजोको निहुँमा जवान छोरीको बिबाह हुन सक्दैन् । नेपाली समाजमा यस्ता थुप्रै समस्याहरु रहेका छन् । यी र यस्ता समस्याहरुमा हरेक दिनजसो आवाज उठाउन जरुरी छ ।
सामाजिक आचरणमा परिवर्तनका लागि एक दिन लाखौं करोडौं खर्च गरेर गरिने कार्यक्रम भन्दा गाउँमा गएर गरिने चेतनामुलक कार्यक्रमले विशेष अर्थ राख्ने केही मानिसहरुको तर्क रहेको छ । आज पनि नेपालमा धेरैं यस्ता नारीहरुको जमात रहेको छ, जसलाई नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका बारेमा जानकारी हुँदैन । आफुहरुले पाउँनुपर्ने अधिकारका बारेमा जानकारी हुँदैन ।
सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक कारणले गर्दा महिलाहरु लामो समय देखि नेपाली समाजमा पिडादायक जीवन जिउँन बाँध्य भएका छन् । देशमा महिला राष्ट्रपति भएकोमा नेपालले गर्व गर्नसक्छ तर महिला राष्ट्रपति भएको अनुभुति नेपाली महिलाहरुलाई हुन्छ कि हुँदैन ? बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तले सात महिना भैसक्दासम्म न्याय पाउँन सकेकी छैनन् ।
हरेक दिन हत्या, हिंसा, बोक्सी, छाउपडी र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । आफ्नैं आफन्त घर परिवारबाट नारी सुरक्षित नरहेको बेला एक दिन मनाइने नारी दिवसको के अर्थ हुन्छ ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजदूतद्वयद्वारा शपथ
तयार बनेको ओखलढुङ्गाको बिमानस्थलमा किन नियमित उडान भएन ?
खोटाङमा माछा निकाल्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु
के टु हिमाल आरोही दलका सदस्यहरुलाई नेपाली सेनाले गर्यो सम्मान
राँगासँग ठोक्किदा एक जनाको मृत्यु
एसियामै पहिलो पटक ओली सरकारले बनायो माटोको डिजिटल नक्सा